Vysokopreosvyaschennyy Mefody, ngubani manje uphokophele uMnyango Perm futhi Solikamsk endaweni ethile ye Lobu-Orthodox LaseRussia - omunye iziKhulu impikiswano iningi Lobu-Orthodox LaseRussia. Esikhathini esidlule yamuva, uzishaya esihlalweni sobunzalamizi, ukuncintisana kanye Metropolitan Kirill elisentshonalanga. Ekuphileni nasenkonzweni yaleli yomuntu izakukhashelwa okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Ubuntu Metropolitan noMethodius
Kwazalelwa Metropolitan noMethodius (amaJalimane), isithombe ongawabona ngezansi, February 16, 1949 e-Ukraine, ensimini ka yesimanje Luhansk esifundeni. Ngemva kokuqeda isikole, wathola imfundo yezwe ekolishi of wesitimela yezokuthutha, okwathi ngemva kwalokho langena Odessa Theological Seminary, kusukela lapho wathola iziqu ngo-1972. Kwaba choice atypical, okwakwenza esizayo Metropolitan noMethodius (amaJalimane). Umndeni wakhe we abasebenzi, kodwa into bathonya insizwa exhumene ukuphila kwabo inkonzo esontweni. Ukulandela mhlangano, wangena Theological Academy eLeningrad, bese iziqu ngesikhathi Moscow Theological Academy. Ngalesi sikhathi wanika kwentsha ezikoleni zenkolo Lobu-Orthodox LaseRussia aya kwamanye amazwe, ngokuvakashela Greece, Bulgaria kanye Finland.
Ngo-1974, ikusasa Metropolitan noMethodius kuthatha izifungo Izigodlo ebulawa Vysokopreosvyaschennogo Nikodima, Metropolitan kweLeningrad futhi Novgorod. Ngalesi sikhathi uthatha igama behlonipha noMethodius Equal-uthisha lwamaSlav. igama Civil inikezwe naye ngombhapathizo - UNicholas. Ngemva kwezinsuku ezimbili ukuphuca ukhakhayi Monk noMethodius uthola diaconate ongcwele, futhi ezinyangeni ezimbalwa ukuba umfundisi.
Ukukhonza njengoba ROC Ophakeme
Ngo ngemuva lobuNaziri bakhe eminyakeni yokuqala, Metropolitan noMethodius wakhonza e Moscow, le Novodevichy Sezindela. Ngesikhathi esifanayo waqala umsebenzi wakhe owayelapho uMnyango sangaphandle Church Relations, nje kwezinyanga ezimbalwa kokuqala njengoba umsizi abavamile ukuba usihlalo nesekela womnyango. Kuyinto ikhasi kuhle umnyama biography of Bishop noMethodius. Ngemva kokuwa eU.SSR wavulwa amaqiniso amaningi nokubambisana abefundisi ne-KGB. Phakathi kwezinye izinto, kwaba sobala ukuthi DECR yayiyindawo echumayo sithunywa amasevisi eziphathelene nokuvikeleka ngaphakathi Lobu-Orthodox LaseRussia, futhi umsebenzi dizzyingly okusheshayo Metropolitan noMethodius wenza khona nje kuphela ukuphathwa supply nokuvikeleka. Kamuva, la mabutho efanayo yathonya ukhetho yakhe eya episcopate. Yiqiniso, ngemva kabusha iqiniso lokuthi Metropolitan noMethodius, sezempi-KGB futhi kwadingeka elisezingeni isikhulu isakhiwo, waba bagibele. Inqubomgomo efanayo eyaphishekelwa nokuzenzekalelayo zonke ezinye ukubuthela abapristi, kwaba okuningi. Ngokuvamile, ababhishobhi isinyathelo esinjalo ukuxazululwa ngoba kwakuwukuphela kwendlela ukuthola oda ongcwele noma ukugcina bona.
Ngemva kwalokho Metropolitan Mefody (AmaJalimane) lusebenta ezahlukene isikhundla archimandrite amathempeli eMoscow, kuze kube unyaka 1980 akuyona waphakanyiselwa isithunzi sombhishobhi.
Amagama futhi ukugcotshwa kwababhishobhi ngu Archimandrite noMethodius wawenziwa ngoZiqu-zintathu-uSergiyu Lavra. inkonzo Indawo umbhishobhi omusha kwaba uMnyango Irkutsk kokuhlanganisa ngaphansi ezifundeni kahle Chita nakwamanye amadolobha. Ngaphezu kwalokho, kanye le-Irkutsk bhishobhi wanikwa ukulawula kwesikhashana eKhabarovsk izakhiwo zesonto.
Kodwa wakhonza eSiberia, Metropolitan noMethodius eside - eminyakeni emibili kamuva wathunyelwa Voronezh. Ngo 1985-1989, zifana kuya enkonzweni Episcopal, ubizwa ayezosebenza njengabaqondisi le ezezimali nezomnotho umphathi Sabefundisi.
Ngo-1985, Preosvyaschennyy Mefody iba umbhishobhi. Ngo-1988 - i-Metropolitan, njengoba umvuzo wemizamo yabo ekulungiseleleni futhi ubambe imigubho wokugubha 1000th we Ukubhapathizwa Russia.
Ngo-1997, Metropolitan noMethodius uqokwa Yobungcwele yakhe Alexy II, uMphathi weSonto eMoscow All Russia, yokuma ilungu ikhomishini nokulungiselela kanye ukugubha iminyaka engu-2000th kobuKristu. Ngesikhathi esifanayo liphinde ungusihlalo Umlando Legal iKhomishana Lobu-Orthodox LaseRussia.
Njengengxenye ikhomishini ahlukahlukene Metropolitan noMethodius kuyinto ngenkuthalo inkhulumomphendvulwano ezihlukahlukene izinhlangano zenkolo. Ingabe uhlu amalungu eBhodini Labaphathiswa le "Orthodox Encyclopedia" ebhodini isihloko kushicilelwe "ethi World Religions", minyaka yonke enyatheliswa yi-Russian Academy of Sciences, kanye wekota "Historical Bulletin".
Ngo-2003, Vysokopreosvyaschennyy Mefody waba inhloko yalawa Metropolitan District e-Republic of Kazakhstan, ethwele ukukhonza khona kuze 2010, lapho esinqumweni esiGungwini Esingcwele, washintshelwa ku-archdiocese Perm. A isikhundla ayigcine kuze kube yilolu suku.
Ascension Usuku: uthi futhi lokho kusho ukuthini kumaKristu?
UVladimir Church: i Uhlolojikelele, umlando, amaqiniso athakazelisayo kanye nokubuyekeza
Wezingane playpen - amathiphu namasu
Drum utamatisi: iresiphi Ungadla elungisiwe